မိုကျလေးကိုငျပွီး ရယျစရာဘဲပွောခငျြဗမေဲ့ သေ နတျကိုငျရတဲ့ တိုငျးကြျော ဟားငါးကောငျတို့ ပွောပွလာတဲ့စကားမြား…. – Shwe Thadin
တခြိနျက ဟာသတှပွေောတဲ့ လူရှငျတျောတှဆေိုပမေယျ့ အခုခြိနျမှာ တဖှဲ့လုံးအနနေဲ့ ရယျစရာပကျြလုံးတှပွေောမထှကျနိုငျတော့တဲ့ နောကျကှယျက အကွောငျးရငျးကို ပွောပွလာတဲ့ တိုငျးကြျော..လူရှငျတျောတိုငျးကြျောတို့ ဟားငါးကောငျအဖှဲ့ကတော့ လှတျမွောကျနယျမွမှော
စဈရေးလကေ့ငျြ့ရေးသငျတနျး သှားတကျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
ပွညျသူတှကေို ကာကှယျဖို့အတှကျ အရာအားလုံးကို စှနျ့လှတျပွီး တောထဲကိုထှကျလာခဲ့တဲ့ သူတို့အဖှဲ့ကို ပွညျသူတှကေလညျး လေးစားခြီးကြူးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ ။ သူတို့ကတော့ အမှနျတရားရဲ့ဘကျတျောသားတှအေဖွဈ ရပျတညျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ရှိနတော ဖွဈပါတယျ ။
တောထဲတောငျထဲမှာ ပငျပနျးဆငျးရဲစှာ နထေိုငျနရေပမေယျ့လညျး သူတို့အဖှဲ့က လုံးဝစိတျဓာတျမကဘြဲ အမွဲတမျး တကျကွှနကွေတာ ဖွဈပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ သူတို့က ပွညျသူတှေ အားတကျစဖေို့အတှကျပါ အမွဲတမျး တိုကျတှနျးနှိုးဆျောပေးနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ ။
မိုက်လေးကိုင်ပြီး ရယ်စရာဘဲပြောချင်ဗေမဲ့ သေ နတ်ကိုင်ရတဲ့ တိုင်းကျော် ဟားငါးကောင်တို့ ပြောပြလာတဲ့စကားများ….
တချိန်က ဟာသတွေပြောတဲ့ လူရွှင်တော်တွေဆိုပေမယ့် အခုချိန်မှာ တဖွဲ့လုံးအနေနဲ့ ရယ်စရာပျက်လုံးတွေပြောမထွက်နိုင်တော့တဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ တိုင်းကျော်..လူရွှင်တော်တိုင်းကျော်တို့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ကတော့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ
စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း သွားတက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး တောထဲကိုထွက်လာခဲ့တဲ့ သူတို့အဖွဲ့ကို ပြည်သူတွေကလည်း လေးစားချီးကျူးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ကတော့ အမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားတွေအဖြစ် ရပ်တည်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
တောထဲတောင်ထဲမှာ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ နေထိုင်နေရပေမယ့်လည်း သူတို့အဖွဲ့က လုံးဝစိတ်ဓာတ်မကျဘဲ အမြဲတမ်း တက်ကြွနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် သူတို့က ပြည်သူတွေ အားတက်စေဖို့အတွက်ပါ အမြဲတမ်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အခုလည်း တိုင်းကျော်က အရင်ကဆိုရင် စင်ပေါ်မှာ လူရွှင်တော်ဝတ်စုံနဲ့ ဟာသပြောရတဲ့ဘဝကို ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ ပြည်သူတွေထဲက တစ်ချို့မိသားစုတွေ ငိုနေရတာမြင်ပြီး သူတို့ရယ်စရာတွေ မပြောနိုင်တော့ကြောင်း ဖွင့်ဟလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် တိုင်းကျော်က သူတို့အဖွဲ့ကို ဂရုစိုက်ပါ၊အားတင်းထားပါလို့ မပြောဘဲ
ပြည်သူတွေသာ ဂရုစိုက်ပြီးနေကြဖို့ ပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ချိန်တုန်းက ပျော်တော်ဆက်တွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ အသည်းမာစပြုနေတဲ့ ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
စဈကောငျစီ့ ဖဖေျောဝါရီကတညျးက အခုထိ တစိုကျမတျမတျသှားနတေဲ့ သတိပွုစရာဗြူဟာရဲ့ဦးတညျခကျြမြား